‘गुडियारानी’ नायिका सुहाना थापाका हेर्नुहोस् १० अवतार !
‘ए मेरो हजुर ३’बाट काठमाण्डौमा आयोजना भएको ‘डी सिने अवार्ड’मा उत्कृष्ट डेव्यु नव-नायिका भएकी छिन् । उनि नेपाली चलचित्रमा आउनु भन्दा पहिले अमेरिकामा अध्यनरत थिइन्
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा पछिलो समय निकै चर्चामा रहेकी नव-नायिका हुन् सुहाना थापा । उनले आफ्नै होम प्रोडक्सनले निर्माण गरेको चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ३’ बाट नेपाली रजटपट मा भित्रिएकी हुन् ।
उनको अभिनय र सुन्दरतालाई दर्शकले निकै रुचाएका छन् भने चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ३’ले बम्पर कलेक्सन गरेर सुपरहिट भैसकेको छ । उनले चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ३’बाट काठमाण्डौमा आयोजना भएको ‘डी सिने अवार्ड’मा उत्कृष्ट डेव्यु नव-नायिका भएकी छिन् । उनि नेपाली चलचित्रमा आउनु भन्दा पहिले अमेरिकामा अध्यनरत थिइन् ।
हेर्नुहोस् नायिका झरना थापाकी गुडियारानीका सुन्दर तस्बिर :
युट्युबले एक वर्षमा कति कमाउछ ?
संसार कै सबैभन्दा ठूलो र प्रचलित भिडियो प्ल्याटफर्म युट्युबले पहिलोपटक आफ्नो वार्षिक कमाइलाई सार्वजनिक गरेको छ । यसभन्दा अगाडी युट्युबले आफ्नो वार्षिक कमाइ सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक गर्दैन थियो ।
गत वर्ष अर्थात् सन् २०१९ मा युट्युबले १५ अर्ब डलर बराबरको कमाइ गर्न सफल भएको छ । उक्त मूल्यलाई नेरूमा रुपान्तरण गर्दा १५ खर्बभन्दा पनि बढी हुन पुग्छ ।
स्थापनाको १५ वर्ष पछि युट्युबले पहिलो पटक आफ्नो वार्षिक कमाइलाई सार्वजनिक गरेको हो । सन् २०१८ मा गुगलले युट्युब मार्फत ११.२ अर्ब अमेरिकी डलर कमाउन सफल भएको थियो । यसर्थ, यो वर्ष युट्युबको कमाइ लगभग ३७ प्रतिशतले बढेको छ ।
युट्युबबाट भएको कमाइ गुगलको कुल कमाइको १०% प्रतिशत रहेको छ । यसर्थ गुगलले युट्युबबाटभन्दा पनि अन्य सेवाहरू – जस्तै गुगल सर्च, एन्ड्रोइडबट नै धेरै पैसा कमाएको छ । गुगल सर्चले गत वर्ष मात्र ९८.१ अर्ब अमेरिकी डलर कमाउन सफल भएको छ – जुन गत वर्षको तुलनामा १५ प्रतिशतले बढेको हो । कम्पनीले गत वर्ष मात्र १०.७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको फाइदा गर्न सफल भएको छ ।
गुगलका अनुसार युट्युब प्रिमियमको प्रयोगकर्ता संख्या २ करोड रहेकाछन् । युट्युब प्रिमियम भनेको युट्युबको प्रचार रहित संस्करण हो जसका लागि प्रयोगकर्ताले मासिक शुल्क तिर्नु पर्ने हुन्छ ।